Home » Diinta » Raddin Shubbaha ah – Muxammad (NNKH) wuu dagaalamay!! (Taxane qoraallo lagu difaacayo Suubanaha)
10/31/2012 7:52 PM5 commentsViews: 131
Waxaynu horey usoo bandhigney qoraal uu inoosoo direy nin sheeganaya diinta Masiixiyadda oo Soomaalida riddowday kamid ah, isagoo sababa aad u tira badan oo aanu Nebi Muxammad (NNKH) u noqon karin Nebi sheegey. Indha adeygiisa wuxuu ku andacoonayaa inaanu heli karin cid uga jawaabi karta su’aalahaas iyo shubbahadaas, asagoo jahli halkii ugu hooseysay garaacaya. Waxaan jeclahay maanta inaan hal hal u qaado oo aan u iftiimiya xaqnimada Nebi Muxammad (NNKH) haddii uu Rabbi la doono hanuun wuu ku hanuuni doonaa, haddii kalena jahligiisaas buu dhex muquuran doonaa, towfiiqduna waa xagga Alle. Waxaan jeclahay maadaama uu mawaadiic badan ka hadlay, in marka hore aan raddiya mowduuca ugu horreeyay sababayntiisii iyo suaalihii ka dhex guuxayay ee ahayd in Nebi Muxammad (NNKH) aanu nebi ahayn, sababtoo ah waa dagaallamay, dad buu laayay. Sababaha ugu weyn ee Nebi Muxammad (NNKH) aanu u ahayn nebi ayay tani kamid ahayd sida uu Hassan qabo, bal ee waaba qodobkii ugu horreeyay ee uu Hassan u sababeeyay arrikaasi.Wuxuu yiri Muxammad ma noqon kara Nebi 500 oo sababood dartooda… Wuxuu kow yiri wuxuu laayay dad badan, wuxuu ku duulay dhulal badan oo ay qabsadeen asxaabtiisii asaga dhimashadiisii kadib.. Wuxuu marka aaminsan yahay nin sidaasi sameeyey inaanay usuurtoobeyn noqoshada Nebi. Sidee buu Nebi ku noqon karaa hadduu sidaa sameeyay? Waxaan tusayaa inuu Nebi noqdo nin sidaasi sameeyey.. Mase oranaya sidaas Nebi Muxammad (NNKH) baa sameeyey, waayo meel kaloo ka fudud ayaa jirta inaan jahligiisa ka tusa ninkan. Nebi Muxammad (NNKH) raxmad buu u ahaa caalamka oo dhan, Jin iyo insi ayaana loosoo saaray.
Exodus/ Baxniintii 15: 1d 1. Rabbigu waa nin dagaal, magaciisuna waa Rabbi
Saliibka iyo thaaluuthka aad aaminsan tahay ee aad tiraahda waa Rabbi naxariis, oo waaba mid dagaale dhoohanoow!!, bal ka warran tanna? Rabbi dagaal ah baad oranaysaa wuxuu soo direy Ibraahiim, Muuse, Yacquub, Haruun, Ishaciyaah, Danyeel, Yoxannaa (Yaxya) Zakariya, Xeseqiyeel, Jeremiyaah- dhammaan kuwani Baybalka ayaa ku sheegaya inay ahaayeen Nebiya weliba lagu qiimeeya dhexdiisa… Daa’uudse Nebi buu ahaa, Baybalka weliba Nebiyada lagu weyneeya ayuu kamid yahay, isagu immisa dada buu laayay? Immisa dagaal buu galay? Boqortooyada siduu ku heley? Muuse ma dagaallamay mise ma dagaallamin? Yooshaca ina Nuun-na miyaanu dagaallamin? Mar kale eeg halkan maskiin lasoo khiyaanayoow!!Exodus/ Baxniintii 17: 16d 16. Oo wuxuu yidhi, Rabbigu waa dhaartay, oo Rabbigu wuu la dagaallami doonaa reer Camaaleq ka ab ka ab. Rabbiga waa dhaartay, yuu u dhaartay? Reer Camaaleq, si ka ab ka ab uu ula dagaalo, waa haggaag… Cahdigaasi dhaarta waxay ahayd waqtigii Muusa, isaga ayaana la amray inuu laaya. Rabbigii Muuse amray dagaalkaasi miyaanu Muxammad amraynin? Hadduuse Muuse markaasi Nebi ahaa, arrintaasina ay Nebinnimadiisii wax u dhimi weyday, maxay tahay sababta aad u dureysa Nebinnimada Muxammad (NNKH)? Mar kale eeg.
Deuteronomy/ Sharciga ku noqoshadiisa 25: 19d 19. Sidaas daraaddeed markii Rabbiga Ilaahiinna ahu idinka nasiyo cadaawayaashiinna hareerahiinna ku wareegsan oo dhan, idinkoo jooga dalka Rabbiga Ilaahiinna ahu uu dhaxal idiin siinayo inaad hantidaan aawadeed, waa inaad reer Camaaleq ka baabbi’isaaninta samada ka hoosaysa, oo taas ha illoobina.
Numbers/ Tirintii 21: 24d- 25d, 30d- 31d, 33d- 35d 24. Markaasay reer binu Israa’iil seef ku dileen, oo waxay qabsadeen dalkiisii tan iyo Arnoon iyo ilaa Yabboq, iyo xataa tan iyo reer Cammoon, waayo, soohdintii reer Cammoon wuu xoog badnaa.
34 Markaasaa Rabbigu Muuse ku yidhi, Ha ka cabsan, waayo, gacantaadaan geliyey isaga iyo dadkiisa oo dhan iyo dalkiisa, oo waxaad isaga ku samayn doontaa sidii aad ku samaysay Siixon oo ahaa boqorkii reer Amor oo Xeshboon degganaa. 35. Oo iyana waxay dileen isagii, iyo wiilashiisii, iyo dadkiisii oo dhan ilaa ayan isagii waxba u hadhin, oo dalkiisiina way qabsadeen. Faqradahani aad u jeedda waxay qeexayaan in reer banii Israa’iil ay seef ku dileen wixii ay dalkaas ku qabsadeen, iyo weliba inay baabi’iyeen dadkii deganaa Arnoon illaa Yabboq iyo weliba Camoon. Waxay sidoo kale qeexayaan in reer banii Israa’iil ay qabsadeen magaalooyin waaweyn, iyo inay degeen magaalooyinkii reer Amor oo dhan ilaa Xeshboon iyo magaalooyinkii ay ka koobneyd oo dhan (awood iyo xoog). Reer Xeshboon waa baa’baday iyo weliba Diibon oo Ilaahay baa dhahaya siduu xusaya Baybalka annagaa baabi’nnay, illaa Nofax, taasoo gaaraysa illaa Meedeybaa. Kadibna dhulkaas reer Israa’il baa xoog ku degey. Intaa kuma harine jidka Bashaan loo maraya ayay tageen saa waxaa kusoo baxay Cooge oo ahaa boqorkii Bashaan asagoo ay la socdaan dadkiisii, si ay kula diriraann Edrecii.. Ilaahaa Muuse amraya marka, oo oranaya Ha cabsan waayo gacantaadaan geliyey, isaga iyo dadkiisa oo dhan iyo dalkiisa, waxaad kusamayn doontaa sidii aad kusamaysay Siixoon oo ahaa boqorkii Amor oo Xeshboon degganaa. Kadib asaga iyo wiilashisiiba way dileen dadkiisii oo dhanna Muuse baa diley illaa aanay waxba ku harin dalkiisii, wayna qabsadeen.Ka warran marka Rabbiga intaas oo gabood fal ah ku sameeyay intaas oo qoom iyo intaas oo magaalo iyo intaasoo boqor, oo misna amraya Muuse inuu sidaas sameeya, miyaanu amri karin in Muxammad (NNKH) uu sidaas oo kale sameeya? Haddii aad tiraahda Muxammad (NNKH) sidaas buu falay, mana noqon kara Nebi, maxay tahay waxa ka yeelaya inaad tiraahda Muuse waa Nebi, weliba lagu weyneeya Baybalka (oo aad misna u nisbeysaan isaga shanta kitaab ee ugu waaweyn Baybalka, (Genises, Excodus, Leviticuse, Numbers iyo Deutranomy)?Mar kale aqri halkan, umana baahna tacliiq, waayo waa af SoomaaliNumbers/ Tirintii 31: 3d- 18d
18. Laakiinse carruurta dhaddig oo aan rag la seexan daysta. Ka warran mar kale, Muuse ayaa amraya dadka dagaal si loo baabi’iya reer Midyaan, oo umada badan laaynaya? Sidaan yaa amray, mise waxaad inkirtaa isaga dhan, sida aad u dafireysa Nebi Muxammad (NNKH)? Muuse waxaanan inkireynin Nebinimadiisa umadda Islaamka, wax badan oo aad ku sheegteenna waa ka hufan yahay… Muxammadna (NNKH) wax aanu Nebi samaynin ma samayn.Bal sidan hoosana eeg, ma Muxammad ( NNKH) baa sameeyay mise waxa aad aaminsantahay?Deuteronomy/ Sharciga ku noqoshadiisa 2: 33d- 34d
2. Oo markii Rabbiga Ilaahiinna ahu iyaga gacanta idiin soo geliyo, oo aad iyaga laysaan, markaas waa inaad iyaga dhammaantood wada baabbi’isaan. Waa inaydaan axdi la dhigan, oo aydaan u naxariisan innaba 16. Oo waa inaad wada baabbi’isaan dadyowga Rabbiga Ilaahiinna ahu gacanta idiin soo gelin doono, oo waa inaydaan iyaga u nixin, oo ilaahyadoodana waa inaydaan u adeegin, maxaa yeelay, taasu dabin bay idiin noqonaysaa.
Bal eeg Baybalkaaga ayaa kuu jawaabayaDeuteronomy/ Sharciga ku noqoshadiisa 13: 12d- 15d 12. Oo haddaad wax ka maqashaan mid ka mid ah magaalooyinka Rabbiga Ilaahiinna ahu idiin siinayo inaad degtaan,
Rabbigu ma ogalaanin diin kale diintii nebi Muuse ee Towraadda ahayd mooyaane, sidaa daraaddeed ciddii la timaadda wax la yiraahda dhagax caabbud iyo cibaada kale, seef hallagu dila ayuu amrayaa sida halkan kaaga cad. Rabbiga sidaa falay ee Muuse Nebi ka dhigey miyaan Muxammad (NNKH) kufali karin, haddiisa uu Rabbi ka cadhooda in tii Towraadda ee uu soo dejiyey diin kale lagu ag caabbuda, muxuuna uga carooneyn in diinta Muxammad (NNKH) diin kale lagu ag caabbuda? Haddii uu Muusaha sidaa la amray ama falay yahay Nebi, maxaad ku dafiraysaa Nebinnimada Muxammad (nnkh)? Sidee baad ula yaabaysaa arrin uu sameeyay Nebi Muuse oo misna Baybalku uu kuu sheegaya?Samadu waxaa habeenkii lagu qurxiyey xiddigaha, laakiin Baybalka waxaa lagu qurxiyey erey aanan halmarna kitaabka Quraanka lagu xusin, waa seefta, oo mar walba oo waan aqrinayaa Baybalka aad istiraahdaba indhaha kaa qabanaysa, argagaxna kugu rideysa.. Bal eeg faqrooyinkan mar kale.Joshua/ Yashuuca 6: 21d 21. Markaasay wax alla wixii magaalada ku jiray wada baabbi’iyeen, raggii iyo dumarkii, iyo dhallinyaradii iyo kuwii da’da weynaaba, iyo dibidii iyo idihii, iyo dameerradiiba, kulli waxay ku laayeen seef.
42. Oo boqorradaas iyo dalkoodii oo dhan Yashuuca isku mar buu wada qabsaday, maxaa yeelay, Rabbiga ah Ilaaha reer binu Israa’iil baa u diriray reer binu Israa’iil. Bal tanna ka warran, ma qireysaa markani inaadan ku dafirin karin Muxammad (NNKH) nebinnimadiisa inuu laayay dad, waayo wixii la colleytama Nebi waa inuu iska qabtaa, sidaasina Ilaahay baa amraya…?Nebiyada dagaallantay ee Baybalku xusay kuwooda ugu waaweyn, waa ka horreeyeen Ciise, dhammaan Nebi dagaallamay oo Ciise ka dambeeyay ma jira Muxammad (NNKH) mooyaane. Nebiyada uu Baybalka xusey ee dagaallamay waxaa kamid ah Muuse, Da’uud, Suleymaan, Yashuuca iyo kuwa kaloo badan. Sidoo kale waxaa amarka Rabbi ku dagaallamay Daaluut boqorra badan oo qeyrkiisa. Kuwaasi inta ay laayeen Muxammad (NNKH) raggiisu ma aanay laaynin.. Maxaad ku dafiri kartaa marka Nebinnimadiisa? Maxaad nebiyadaasi ula yaabi weyday oo aad Muxammad (NNKH) ula yaabaysaa?Wallaahi way ku qaldeen kuwii kuu aqriyey taariikhda khaldan, kaana dhaadhiciyey in Baybalku yahay naxariis.
20. Waayo, xagga Rabbiga ayay ka timid inuu qalbigooda adkeeyo, si ay dagaal ugu soo baxaan reer binu Israa’iil, oo uu dhammaantood u baabbi’iyo, oo aanay waxba inna raallinimo ka helin, laakiinse uu u wada baabbi’iyo sidii Rabbigu Muuse ku amray. Bal wax ka dheh, cadhuuftaada dib u laq, oo garo in lagu sirey, kuna laabo towxiidka xaqa ah, laf cad baad toobeysaaye.Mar kale eeg Samu’eel oo kamid ahaa kuwa lagu weyneeya BaybalkaSamu’el I/ Kitaabkii Kowaad ee Samuu’eel 15: 2d- 3d
3. Haddaba tag oo reer Camaaleq laay, oo waxay haystaan oo dhan wada baabbi’i, oo iyaga innaba ha u turin, laakiinse wada laa nin iyo naag, iyo dhallaan iyo caanonuugba, iyo dibi iyo ido, iyo geel iyo dameerroba. Ka daroo dibi dhal, bal mar kale isha la raac xaadisadaniXaakinnada 1: 2d- 6d, 8d- 13d, 17d- 20d, 22d- 25d
6. Laakiinse Adonii Beseq waa cararay, oo iyana way eryoodeen, wayna qabteen isagii, oo waxay ka gooyeen suulashiisii gacmaha iyo kuwiisii lugaha. 8.Oo Reer Yahuudah waxay la dirireen reer Yeruusaalem, oo intay magaaladii qabsadeen ayay dadkeedii ku laayeen seef, magaaladiina dab bay qabadsiiyeen.
16. Markaasaa Rabbigu wuxuu ku yidhi, Hubaal waan kula jirayaa, oo waxaad reer Midyaan u layn doontaa sida nin keliya. Hooge!! sidee bay wax u jiraan? Maxaad ula yaabaysaa in Muxammad (NNKH) iyo ciidamadiisu ay dhul kale kuduulaan, ama dagaallamaan, iyadoo markii horeba dagaalka iyaga lagu billaabay.Miyaanan Muxammad (NNKH) iyo raggiisii lagu ciqaabi jirin magaalladii Makka heer ay ka kala qaxeen baladkii ay kudhasheen kuna barbaareen? Miyaanan la goynin ehelkii uu ka dhashay oo la faquuqin, lana oran looma guurinaya lagamana guurinaya.. Waxaad soo gudbisay kutubbo aad leedahay waa marjaca aan kasoo qaatay su’aalaha, sida kan Ibn Hishaam, iyo kan Ibn Kathiir, laakiin miyaadanba aqrinin taariikhda Muxammad (NNKH) iyo sidii ay ula dhaqmi jireen tolkiisa Qureeshta? Immisa mar ayay damceen inay dilaan? Haddii aad aqrisay kutubbada aad leedahay ayaga ayaan kasoo aqriyey waxan, sheeg halka iyo goobaha aad kasoo aqrisay, waayo innagu korka ayaanu ka qeybnay taariikhda.. Qaasatan aniga kitaab taariikhul Islaam oo aanan bog bog u rogin ma jirta, Muslimiin badanna sidaas oo kale ayay uga dheregsan yahiin, laakiin waxaad uun adigu garan weyday inaad isweydiisa dagaalladii Muxammad uu galay wixii sababay iyo siday ku billawdeen iyo halkey ku dambeeyeen. Kahor taa waxaa habboonaan lahayd inaad aqoon u leedahay xasuuqii iyo dagaalladii ay sameeyeen Nebiyadii isaga ka horreeyey, boqorradii reer Israa’iil iyo kuwa galbeedka, dabeetana waxay ahayd haddii aad intaasi aqoon u lahaan lahayd inaadanba xusi lahayn waxa aad xustay ee shubbaha ah, waayo adigaa isaga filnaan lahayd, laakiin jahli baa kusoo istaajiyey halka aad soo istaagtay. Islaamku ehel uma ahid, waxa aad sheegatayna ma aadan gaarin oo aqoonteedii ayaad ka arradan tahay, taas ayaa ugu habboon wax laguugu cududaaro.Bal eeg Daa’uud muxuu leeyahay sida kuxusan Baybalka, gaar ahaan kitaabka SabuurtaPsalms/ Sabuurradii 18: 34d
15. Oo Rabbiga Ilaahiinna ahu wuxuu dhexdiinna idiinka kicin doonaa nebi sidayda oo kale oo walaalihiinna ka mid ah, oo idinku waa inaad isaga dhegaysataan, 18. Waxaan iyaga walaalahood uga dhex kicin doonaa nebi sidaada oo kale ah, oo markaasaan afkiisa gelin doonaa erayadayda, oo isna wuxuu iyaga kula hadli doonaa wax alla waxaan isaga ku amri doono oo dhan.Haddii aad u fiirasato labadaasi faqradood waa ay isu macno dhaw yahiin in kastoo midi (ta 15d) ay tahay farriin ama bishaaro uu ku hadaaqaya Muuse (NDH) oo uu gaarsiinaya reer Israa’iil, midna (ta 18d) hadal toos ah oo Alle kula hadlaya Muuse.
Reer banii Israa’eel kuma abtirsadaan Ismaaciil (NDH), Carabina kuma abtirsata Isxaaq. Taa macnaheedu waxaa weeye Nebi Ciise (NDH) ama Muuse (NDH) kuma abtirsadaan Ismaaciil, Muxammedna kuma abtirsada Isxaaq. Ismaaciil iyo Isxaaq farqiga u dhaxeeya waa in Ismaaciil ay Carab ku abtirsata, Isxaaqna ay Yahuudda ku abtirsata. Haddaba Nebiga ay tilmaamayaan faqradahani waa inuu yahay reer banii Israa’eel walaalahood mid ka dhashay. Waa ‘ayo reer banii Israa’iil walaalahood? Dabcan waa Carab. Haddii Nebiga la sugayaahi ee uu ku bishaareyay Muuse uu ahaan lahaa mid ka dhashay reer banii Israa’iil, bishaaradu ma oran lahayn walaalahood, bal’ ee waxay oran lahayd Iyaga dhexdooda. Bal u fiirso!! mar kale.
18. Waxaan iyaga walaalahood uga dhex kicin doonaa nebi sidaada oo kale ah, oo markaasaan afkiisa gelin doonaa erayadayda, oo isna wuxuu iyaga kula hadli doonaa wax alla waxaan isaga ku amri doono oo dhan. Nebi sidee ah? Sidaadoo kale ah Muusoow!!. Haddaba Muuse iyo Ciise ma isku mid baa? Waa kumase Nebiga ugu dhawaan og ama ugu shabbah badan xagga Muuse, marka laga hadlaya Muxammed (NNKH) iyo Ciise (NDH)? Maya ee waa kuma Nebiga ugu shabbah badan Muuse ee dabadiis yimid? Miyaa laga helayaa Nebiyadii ka dambeeyey Muuse (NDH) ee uu Baybalku xusay Nebi kaga shabbah badan Muxammed (NNKH) xagga Muuse (NDH)?Baybalka ayaa sheegaya taasi in Muuse (NDH) dabadii Nebi lamid ah aanu reer Israa’iil ka kicin. Waa kan bal u fiirso!!
18. Waxaan iyaga walaalahood (iyaga dhexdooda lama oran) uga dhex kicin doonaa nebi sidaada oo kale ah, oo markaasaan afkiisa gelin doonaa erayadayda, oo isna wuxuu iyaga kula hadli doonaa wax alla waxaan isaga ku amri doono oo dhan. Haddii aad tiraahda waa Ciise, sabab? Sideed ku garatay, ma magaciisaad u jeeddaa? Mise sifa Ciise ayaa ka muuqata? Haa waxaad oran doontaa waa Ciise Nebiga lamidka ah Muuse waayo labaduba waa reer banii Israa’iil.. Faqradaa taas kaa diideysa, Ciise martabad ka weyn Nebinnimada ayaad kusheegteen oo gaadhsiisan Ilaanima iyo inuu yahay wiilkii Ilaahay, sidoo kale Mucjiso ayuu kudhashay, laakiin Muuse dhalasha dabiici ah ayuu ku dhashay. Faqraduna kama hadlaysa reer banii Israa’iil ee iyaga ayay la hadlaysaa oo oranaysaa walaalahood, walaalahoodna waa Carab sida uu xusaya Baybalku.Ma sheegi kartaa meel kaloo ay iska shabbahaan Ciise iyo Muuse? Malagaaga fadhiya, haddaba bishaaradani Ciise boos ugama banaano, waayo Nebiga ay tilmaamaysa waa mid ka dhashay reer Israa’iil walaalahood Carab, Ciisana ma ahayn Carab.
10. Oo tan iyo waagaasna reer binu Israa’iil dib kama dhex kicin nebi Muuse la mid ah oo Rabbigu fool ka fool u yaqaan. Muuse dabadii mid lamida maba ka kicin reer Israa’iil, siduu marka Daa’uud oo reer Israa’iil ah u noqon karaa.Arrinka dagaalka ee aad is lahayd ku liid Nebi Muxammad (NNKH) Nebinnimadiisa waxaa dafiraya Baybalka aad aaminsan tahay oo sugaya Nebinnimada Nebi Muxammad (NNKH).
20. Laakiinse nebigii wax aanan ku amrin leh oo si kibir ah magacayga ugu hadla, ama kii ilaahyo kale magacood ku hadlaa, nebigaasu waa inuu dhintaa. 21. Oo haddaad qalbigiinna iska tidhaahdaan, Sidee baannu u garanaynaa eraygii aan Rabbigu ku hadlin? 22. Markii nebi ku hadlo magaca Rabbiga, haddii wixii uu ku hadlay ayan ahaan oo ayan noqon, waxaas ayaa ah waxa aanu Rabbigu ku hadlin. Nebigu si kibir ah buu u hadlay ee waa inaydaan ka cabsan innaba.
5. Saas waxaa leh Ilaaha Rabbiga ah oo samooyinka uumay oo kala bixiyey, kan dhulka iyo waxa ka soo baxaba kala fidiyey, kan dadka jooga neefta siiya, oo kuwa dhulka ku socdana ruuxa siiya Halkani waxaa kusugan bishaaro iyo wax sii sheeg, uu ka warramaya Nebi Ishaciyaah. Wuxuu Rabbi leeyahay sida kusugan sifir Ishaciyaah ” Bal eega addoonkayga aan tiiriyo, oo aan doortay (Mukhtaar-keyga) oo ay naftaydu ku faraxsan tahay. Ruuxayga ayaan dul saaray. Wuxuu quruumaha u soo saari doonaa xukunka”. Ereyga ”mid la doortay” Carabi ahaan wuxuu noqdaa Mukhtaar, kan aan doortay ”Mukhtaarii”, waa sida ku qoran Baybalka afka Carabiga. Haddaba Mukhtaar waa magac kamid ah magacyada Nebi Muxammed (NNKH) sida kusugan axaadiis saxiix ah oo Nebiga laga soo weriyey. WWaxay kaloo faqradani qeexaysaa weedh kale oo oranaysa”addoonkeyga”. Haddaba waxaa is weydiin mudan nabuu’adan uu ka warramaya Ishaciyaah waa qofma? Yaa iskaleh ama ay u waajibtaa?
Sidoo kale sida faqradani kowaad kusugan weedha ”addoonkeyga” ah ayaa ka hor imanaysa afkaarta Nasaaradu markay yiraahdaan cidda bishaaradu ay tilmaamaysa waa Ciise (NDH). Sow Ciise kuma aanay sheegin inuu yahay Ilaahay laga jasad yeeshay? Haa!! nacam sidaas bay sheegeen, waxayna yiraahdeen ma ahan Nebi oo waa ka weyn yahay Nebi, waana Ilaah kamid ah thaaluuth-ka (Aabbaha, wiilka iyo Ruuxa Quduska ah, kuwaasoo haddana hal ah), yaab!! ”Aabbuhu waa shaqsi!!, wiilkuna waa shaqsi!!, Ruuxul Qudus-kana waa shaqsi!! laakiin ma ahan saddex shaqsi, mayee waa hal shaqsi, mid kastaana waa Ilaah”. Sidaas waa caqiidada Masiixiyiinta ay aaminsanyahiin, waa caqiida aad iyo aad u layaab badan, xitaa ilmaha yar ayaa kuqoslaya waxa kan haddii loo sheega, saddex shaqsi oo haddana hal qof ah, cid kaa yeelaysaahi oo caqli saliima leh majirta sida aan filaya. Qofkii Masiixi ah ee isku daya inuu baaraa xaqiiqda Masiixiyadda waxay dantu biddaa inuu ka carara diintaan thaaluuth-ka ah ee caqligu yeelahayn maankuna wareerinaysa.
Al Mahiim, Ciise waa shaqsiga ay kusheegeen Ilaahay, haddaba su’aashu waxay tahay siday ku noqon kartaa bishaarada halkani kuxusan inay isaga ka hadasha, maadaama weedha halkan kuxusan ee ah ”addoonkeyga”, aanay ogalayn Nasaaradu inay munaasab u tahay Ciise (waxay yiraahdeen Ciise ma ahan addoon Ilaahay, bal’ee waa Ilaahay)? Haddii ay yiraahdaan ”Mayee waa Ciise cidda ay ka hadlaysa, oo Ciise-na waa addoon Alle sida ay tilmaamaysa faqradan 1d ee ku xusan halkan Ishaciyaah, markaas waxaanu leennahay tahniyad baad leedahiin, waayo waa middaas oo qura ta ay ina fartay caqiidada Islaamka, inuu Ciise yahay addoon Alle oo aanu ahayn isaga Ilaahay, waana middaa uun risaalada uu inoo keenay Muxammed (NNKH) Ilaahayna ma yeelan wiil, mana jira Ilaah kale isaga mooyaane. Ogoowse hadday yiraahdaan xataa Ciise waa addoonkii Alle oo isagu ma ahan Illaah, bishaarada halkani ku xusan waxba kama badali doonta inay ishaaraysa Nebi Muxammed (NNKH), sida aynu qeexi doonna hadduu Eebbe idmo.
Laakiin xiilad kale haddii la waayay, ma waxaa la xarrifayaa weedhii ahayd ”addoonkeyga”, oo lagu badalayaa oraah kale oo oranaysa ‘‘wiilkeyga”. Waa yaab iyo amakaag!!. Waxaa ka buuxa kitaabka Baybalka ahi wax la yiraahda suugaan xad, taasoo qorayaashii qorey ay iska soo xadeen, inkastoo inta badan la aqoon qorayaashii asalka ahaa ee qorey. Haddaba Matayos oo aanan la hubin inuu isaga yahay midka qorey Injiil Matayos, oo suugaan xadkaasi aafo ku dhigay ayaa kitaabkiisa Injiil Matayos waxaa kuxusan faqradan kore ee aanu ku xusnay kitaabka Ishaciyaah, taasoo la baddalay weedhii oranaysay ”addoonkeyga” oo qura. Sabab? Maxaa loo baddalay oo looga dhigay weedh kaloon la macno ahayn oo oranaysa ”wiilkeyga”? Taasu waa xarrifaadda uu Illaahay Qur’aanka inoogu warramay in lagu wasakheeyey kutubbadii Towraadda iyo Injiisha.
Waxaa kaloo faqradaasi kuxusan weedhan ‘”Ruuxayga ayaan dul saaray”. Cidda Ruuxa Alle la dul saaraya waa addoonka Alle ee Mukhtaarkiisa ah ee ay ka hadlaysa isla faqradaasi. Waa halkan meesha ay yiraahdaan waxay ka hadlaysaa Ciise. Laakiin Ruuxa ma ahan wax ku gaar ah Ciise, waayo kitaabka Baybalka, wuxuu qabaa in Ruuxa Alle oo cid la dulsaaraahi ay tahay waxyi macna ahaan. Sidaa darteed ma ahan sida ay ku macneeyaan wax u gaar ah Ciise, bal ee waa wax lala wadaago. Waa kan Ruuxa Ilaahay oo dul jooga Nebi Ishaciyaah, markii loo waxyoonayay
21. Rabbigu wuxuu leeyahay, Kanu waa axdigayga aan iyaga la dhigan doono. Ruuxaygaa ku kor jooga iyoerayadaydii aan afkaaga ku riday. Ishaciyaah wuxuu ahaa Nebi ummi ah, sidaa darteed baa halkan la yiri erayadaydii ayaan afkaaga ku riday.
Ma yara meelaha uu ku xusaya kitaabka Qudduuska ahi in Ruuxa Alle yahay waxyiga, ereyga ruuxaygana loola jeeda waxyiga. Haddaba ma ahan wax ku gaar ah Ciise nabadi dushiisa ha ahaatee oo waa wax ay la wadaagaan dadkii la ilhaamiyey, iyo Nebiyadii loo waxyooday. Haddaba sida uu xusaya kitaabka Baybalka ahi Ruuxa Alle, Nebiyadii hore iyo saalixiintiiba way ayidsanaayeen, oo waxay u yaqaaneen waxyiga iyo ilhaanta. Markaa dabadeed weydii bal Masiixiyiintu, haddii xaalku uu sidaas yahay Ciise ma waxaad kusheegeysaan wax ka badan inuu ahaa Nebi? Hadduu arrinku sidaasi yahay, muxuu dheeryahay Balcaam? Waa maxay waxa uu dheeryahay Zakariyah, iyo Saa’uul? Balcaam inaa Baacuur waxaa dul fuulay Ruuxa Ilaah.
2. Markaasaa Balcaam indhaha kor u qaaday, oo wuxuu arkay reer binu Israa’iil oo qabiil qabiil u deggan, kolkaasaa waxaa isagii ku soo degay ruuxii Ilaah. Saa’uul raggiisii Ruuxa Ilaah baa dul fuulay, eeg
20. Markaasaa Saa’uul rag u soo diray inay Daa’uud soo qabtaan; oo iyana markay arkeen guutadii nebiyada ahayd oo wax sheegaya, iyo Samuu’eel oo dhex taagan oo madax u ah ayaa ruuxii Rabbigu ku soo degay raggii Saa’uul soo diray, oo iyana wax bay sii sheegeen. Zakariyah waxaa ka buuxsamay Ruuxa Qudduuska ah, eeg
67. Markaasaa aabbihiis Sakariyas waxaa ka buuxsamay Ruuxa Quduuska ah, waxna wuu sii sheegay Haddii xaalku sidaasi yahay Ciise waxba ma dheera inuu yahay Nebi Alle, waayo weedha lagu qaas yeelaya waa waxyi lala wadaaga, xataa Nebi Muxammed (NNKH) ayaa taasi la wadaagaya. Haddaba haddii la yiraahda bishaaradanu waxay ka hadlaysaa Ciise, maxaa loo oran waayay Zakariyah ayay ka hadlaysaa, ama Nebiyadii kalee reer Israa’iil sida Yoxannaa iyo Daanyeel iyo kuwii Ishaciyaah ka dambeeyey? Maxaa loo yiri waa Ciise iyadoo laga mudan yahay in la yiraahda sidaas? Nacam!! wax kale ma tilmaamaysa bishaaradaasu aanan ahayn Nebi Muxammed (NNKH). Haah!! oo cid kale ma tilmaamaysa, aanan ahayn isaga (NNKH), ila soco uun adigoonan is waalin si degen. Faqrada labaad ee aayadihii aanu markii hore soo qaadannay aan dib ugu laabanno, waa hubaal inay caddahay in bishaaradu iyo cidda laga hadlayaahi ay tahay Muxammed (NNKH). Waxay ahayd faqradu sidan ”Ma uu qaylin doono, korna uma dhawaaqi doono, oo codkiisana kama uu dhigi doono in jidadka laga maqlo”. Nacam!! Nebi Muxammed (NNKH) sida ay Caa’isha tiri wuxuu ahaa mid aamusnaan badan oo af gaaban, dadkuna kuma qaylin jirin, mana cod dheereen. Weligiis labo mar ayuu cod sare kudhawaaqay, labadaasi marna waxaa ka dambeysay guulo uu cadawgiisa ka gaaray, sida aanu ku xusi doonna sadarka dambe, marka aynu ka hadlayna bishaarada afraad ee Ishaciyaah ee aynu halkan kusoo qaadan doonno, hadduu Eebbo idmo.
Laakiin Ciise waxay ka yiraahdeen cod sare buu ku dhawaaqay asagoo saliib uyaal, sidaasi waxaa xusay kitaabka Baybalka Axdiga Cusub. Mark/ Markus 15: 34d
”Kuuguma aanu soo dejinin (Muxammadoow!!) Qur’aanka inaad ku laab cidhiidhyoota”. Suuratu Daahaa 20: 2d Laakiin Ciise waxaa lagu sheegey inuu taag darnaaday oo la diley oo la salbiyey sida ay kusheegeen. Islaamkuse sidaasi ma qabo oo Ilaahay inuu kor u qaatay ayuu qabaa sida uu xusaya Qur’aanka, laakiin xitaa haddii ay oran lahaayeen lama dilin, bishaaradani uma habboonaateen isaga, waayo ninka la yimid shareecada cusub ee faqradani ay tilmaamaysa ee xukunkiisa gasiiraduhu u hoggaansameen waa Nebi Muxammed (NNKH), caddaaladdii xukunkiisuna tan iyo maanta ayaa mashriq iyo maqrib laga sheekeeyaa, waana mid dhulka oo dhan caddaalad ku hagaajiyey. Nebi Ciise ma ahayn wax kale aanan ka ahayn Rasuul loosoo direy reer banii Israa’iil, eeg
24. Laakiin wuxuu u jawaabay oo ku yidhi, La iima soo dirin, idaha lunsan oo reer binu Israa’iil maahee. Rusushiisii xataa wuxuu amray inaanay meel kale aadin, oo aadaan reer Israa’iilka lunsan. Bal eeg mar kale,
6. laakiin waxaad u tagtaan idaha lunsan oo guriga Israa’iil ah. Sharci cusubna uma keenin iyaga, balse wuxuu sheegey inuu u yimid inuu oofiya Towraadda, eeg markale,
17. Ha u malaynina inaan u imid inaan sharciga ama qorniintii nebiyada baabbi’iyo, uma aan iman inaan baabbi’iyo, laakiin waxaan u imid inaan wada oofiyo. Ma la iman shareeca nasakhday Towraad, laakiin waa Muxammed (NNKH) ninka la yimid shareeca nasakhday Towraad iyo Injiil iyo wixii ka horreeyayba.
Afeef qormadani waxay u gaar tahay qoraha iyo webka caasimada.com, lama daabacan karo idan la’aan.
Shaakir	11/01/2012 1:40 PM
Alhmdulilah alal islam mashallah tabarakalah alahu akbar lailaha ilalah muxamadu rasulullah salalahu alayhi wasalam dhamaan asxabta qimaha leh wanisalaamay idilkin casimada.com iyo maxamed dahir, walal qoraladada mashalah aad be noo cajabiyen sida ad ugu hilineysan islmka alaha idinkugu hiliya oo ajar haniga siiya wax badan ayad umada u iftimisen oo meel kala laga heeli karin aniga only barmaamijyadan diiniga ee quuruxd badan aya ad uga aqrista webka ilahay qer hanii siiya amiin islamkana kor si qurxon ba ugu jawab celisen wa waxa jahliga waxa umada lagufasahadiya hadi sidan u ogayhin kitabka BIBLEKA ME kuqaldami lahen
Log in to Reply Wadani	11/01/2012 4:32 AM
Asc saaxiibka quray qoraalka ooo ujawaabaya qofkaan ridoobay waxaan dhihi lahaa qoraalka aadkuridinayso murtadka waa ookeey laakiin xoogaa baan kaa saluugay cinwaanka aadqortay waxaa kamaqan inaad cadayso nabigeena nnkh nabinimadiisa maxaayeelay magaca ayaa kaa soohormaray cinwaanka markaa soogalayso iyo meelaha qaar waxaa muuqanaysa inaadkatagayso nabinimada oo aad saliga kugaabsanayso iyo magaca oo lasheego waxaan jelaan lahaa inaa tiraahdo nabigeena muxamad nnkh waa mahadsantahay
Log in to Reply ahmedeeyos	11/01/2012 4:06 AM
Waxan aad iyo aad ugu mahad naqaya qoraaga maqaalkan dheer oo raadraaca leh (source) oo qof walba ka eegi karo kutugta aad ka soo min guurisay ilaah abaalkeeda janada ha kaaga dhigo hadaba intaa markan ka gudbo dadka soomaliyeed ee gaajada ama jahligu geliyey diin aaney aqoon qoto dheer u lahayn waxan u sheegaya bal waxa afka idin dhuubaya intaad af macaanidiisa iska deysan akhriya kitaabkooda. waxad arkaysan kitaabka bible ka loo yaqaan in uu yahay laba kitaab marka ugu horaysa waa torah oo ah kii ilaah nebi ciise u soo diray iyo ingil oo ah kii nebi ciise allaah u soo diray labadaba waxa aamisan kiristanka halka yuhuudu ka nebi muuse aaminsantahay hadaba waxad ku arkaysa labada kitaab ii laysku daray ee kiristanku aaminsanyihiin (Old testimony iyo New testimony) waxaa ku qoran waxyaalo qof waalan iyo qof miyir qababa aanu qoreen sida aad hada ku arkeysey ayaad ku sheega tusaale ahan samueel 15: 2d iyo 3d waxay sheegaysaa in ilah ku amrey reer banuu israail inay laayaan dadka deeganka degan oo dhan ooney badbaadin rag dumar caruur adhi geel lo iyo wixii lamida mar qudha islamka lama farin in dad shicib ah oo laqabsadey lawada baabi’iyo laakin in wixii ka masuul aha la dilo ama la ciqaabo waa la arkay dembigoodana lagu qaado hadaba ilaaha amray xoolaha in loo laayo reer hebel ba dhaqan jiray caruurtana la laayo haweenkana la laayo duqaydana la laaayo ma kula tahay in ilaaheena uu yahay jawaabtu waa maya mana aha ilaahi reer banuu israa il ee waxaa waxas ku qoray kuwa adinka idin duufsanaya ee shayaadiinta ah hadaba taa keliya ma aha ee waxad ku arkaysa wax yaalo anshaxa ka fog oo nebiyo laga sheegayo sida nebi daauud oo marna nin nebi ah oo wacan laga dhigayo marna nin khariban oo hablihiisa uu dhalay wax u doonta laga dhigayo hadaba ana waxan ku daraya inan sadex vidio oo ka hadlaya diintiina dad idiinka cilmi badan waxay uga baxeen iyo waxa ku yaala inad daawataan qoraagana waxan ka codsanaya in uu afsoomali dadka ugu qoro hadalkooda hadii uu farsamada hayo midi waxay sheegaysa in kitabka Torah tooreeda lagu qoray in nebi muxamed ku qoran yahay oo weliba MOHAMED loogu dhawaaqayo maalinkastana markay yuhuudu kitaabkooda akhrinayaan ay sida ugu dhawaaqan markay soo gaadhan kana hadlayso tilmaanta nebiga ka danbeyn doona muuse oo carabta ka dhalan dooan iyo yuhuud qirsan arinka laakin aan qaadanayn maadama aanu reer banuu israail ahayn cajalka labad iyo kan sadexad wa dad islamka galay oo wadaado ku gaadhay kiristanka oo sheegaya aayado badan oo khariban oo laga garn karo inay yihiin kuwii kitaabada lagu soo daray bal daawasho wacan.
TAN UGU HORAYSA WAXA LA DHAHA THE ABSOLUTE TRUT ABOUT MOHAMAD IN THE BIBLE MICNEHEEDU WAA XAQIIQDA DHABTA AH EE MUXAMED NNKH INUU KU YAALO KUTUBKA BAYBALKA
TAN LABADNA WAXA LA DHAHA HOW THE BIBLE LED ME TO ISLAM MICNAHEEDU TAHAY SIDEE BAYBALKU IIGU SOO HAGAY ISLAAMKA waxa ka hadlaya nin dhalinyaro ah oo ku dhashay diinta kiristanka ah lagu soo koriyey reer dhaqan wacan oo intay kitabka ka haystana isku daya inay ku dhaqman dhaleen wadad kaniisadeed noqdey aad iyo aadna idiinka badiya diintiisa uu asal u laha intaan ilaah ku irsaaqin Islaamnimada marka koley waa xiligii nebigeenu sheegay oo yidhi aakhirsamanka waa leys dhaafaya oo muslimnimadii baa muslimiin ka baxayan gaaladuna gaalnimadoodi bay ka hadoobayan laakin qofna intuu nool yahay lagama quustee bal ila eega inad wax iskaga gara taan baa laga yaaba ninku wuxuu ku hadlaya lahjadayada maraykanka hadii ay idinku adag tahay fadlan qoraga iyo caasimada waxan u sheegayaa inaan eray erey ugu soo turjumi karo emailkayga waad haysane (caasimada.com maamulkeedan ula jeeda not dadkii aan markii hore wax u qorayey) fadlan iigala soo xiriira hadii turjumid loo baahdo si aynu isugu dayno dadkan laynaga duufsadey ee walaaleheen inan hanuunka ku celinkaro oo ilaah inaga ogalado.
yaanan hadalkii idinku badine tana waa cajalkii labad daawasho wacan
KAN UGU DANBEYSANA WAXAN KU SOO QAADAYNA SIDA BAYBALKU ISU BEDELAY (AMA LOO BEDELAY.
HOW THE BIBLE GOT CHANGED
WAXAD KA HELAYSAN XUJOOYIN CANDHUUFTIINA AAD DIB U LAQAYSAN MARKAD DAAWATAN WAXAN IDIN SHEGAYA HADAD NIN TAHAY OO GAAJO AMA CARAB AAD NECEBTAHAY KU GELISEY WAXAD IS WEYDIISA SU AASHA AH SIDEY U DHACDEY IN DENBIGIINA AAD GASHAN (KIRISTAAN AHAN) ILAAHEY WIILKIISI QUDHA UGU OGOLADEY INUU DUSHA KA SAARO (ILAAH WAA KA CEEB LA YAHAY IN UU WIIL IYO WALAL YEESHO) OO ROMANKU U DILAN DABADEEDNA WIXII RUMEEYA WAXAY DOONAN HADAY SAMEEYAN ILAH CADABEYN MAR HADAY INANKIISI RUMAYSAN YIHIIN OK HADABA SIDAY KU DHACDEY IN DEMBIGIINANA NEBI CIISE LA SAARO DEMBIGA CARABTANA IYO XUMAANTOODA NEBI MUXAMED DUSHA KA SAARTAN OO WELIBA TIDHAHDAN CARAB DARTEED BAAN DIINTA UGA BAXNEY MIYANEY CARABTU DAD BINI AADAM AH OO XUMAN IYO SAMANBA LEH AHAYN TAA WAA RAGA TAN DUMARKA IYAGA MADAMA OO MEELA BADAN LAGA SOO GALO OO AY U JILICSAN YIHIIN BUSAARADA OONEY XAMILIN SIDOO KALE AY U JILICSAN YIHIIN JACAYLKA OO KAY KA HELAN ILAAH IYO NEBI MIDNA XASUUSAN (WAA DUMARKA QAAR WAANA QAARKA U JILICSAN ARIMAHA AAN SHEEGAY ) HADABA ANIGU WAXAN KELIYA OO IDINKU WAANINAYA NINKA AAD KA HESHAY BERI WAAD NICI AMA WIXII AAD KA RABTAAD WAAYI WAA DHIMANKARAA WAA FOOL XUMAN GABOWGA DARTII WAA ITAAL DAREYN HADAD ITAL KU RACDEY FADLAN WAX DHAMANAYA HA U BURBURIN MUSTAQBALKAAGA OO AH AAKHIRO INAD CADAAB KU WAARTID.
Log in to Reply Safia Mohamed	11/01/2012 2:22 AM
Asalaamu Calaykum Wa raxma tullaahi Wa barakaatuhu
Waxaan idinku salaamayaa salaanta Islamka oo kor ku xusan, intiina Islaamka ah. walaale waan ka xumahay in aad u jawaabtay, Qaxooti shardi looga dhiga in uu diintiisa ka baxo si cayr loo siiyo. waxaan ku dhahayaa “Hooge, kuwa kaa xoog iyo xoole kaa badan baa diintaan iyo nabigeed wax cay iyo been wax uga qaadi waayay oo maalin walba soo gala Diinta Islaamka, kadib markay ku guul daraysteen dagaalkii diintaan sharafta badan ay kula jireen”
Log in to Reply shabeel	10/31/2012 9:58 PM
maasha allah walaal ilahay qeyr ha kusiiya sida wanaagsan ee aad u difaacday nabiga csw muuratadinta wakuso badatay somalida lakin jaahli ayaa meshas dhigay qarnigan o sidu nebi muxamad scw sii sheegey islamka meel kasta ku faafaya cidi gaalima aada ilaahaa cadaabtisa ku fogeynaya, qofkaas murtadka ee sualaha sidan u leeta qaba e waxaas ku hadlaya ani waxn qabaa caqliga ilaahay ka madhay